IST ANTANANARIVO : Nosokafana ny lalam-piofanana ho an’ny haitao momba ny mari-trano
Hanomboka amin’ity taona ity ny fampiofanana mpianatra ho lasa matihanina mpanampy amin’ny haitao momba ny mari-trano, eny amin’ny IST Antananarivo. 17 septembre 2019
Mpianatra 26 no voafantina hisantatra ny lalam-piofanana. Omaly, nisy ny fihaonana tamin’ny manam-pahaizana avy any Belzika mahakasika ny fampiofanana. Nanambara ny tale jeneralin’ny IST, ny pofesora Rakotomalala Jean Lalaina fa hampanarahana ny fenitra iraisam-pirenena ny fiofanana omena ireto mpianatra ireto mba tsy ho mena-mitaha amin’ny mari-pahaizana azo any ivelany no azon’izy ireo. Nambarany koa fa mila ireto mpianatra hofanina ireto i Madagasikara satria betsaka ny fotodrafitrasa lehibe momba ny trano mila fanavaozana eto.
Ho an’ny mpampiofana vahiny, notsorin’izy ireo avy hatrany fa efa mahazatra ny fanavaozana ny trano lehibe tonta any amin’ny firenena eropeana satria ireny no manome endrika ny tanàna no sady misoroka ny loza. Matetika mantsy no mitera-doza ireny fotodrafitrasa ela nijoroana sy tsy nasiam-panavaozana mandritra ny taona maro ireny. « Efa ela ihany no nieritreretana hoe hanokafana ity lalam-piofanana ity saingy izao vao tena feno ny fepetra hahafahana manangana ny lalam-piofanana. Tsindriana etoana fa manaraka ny fepetra iraisam-pirenena ny lalam-piofanana satria misy mpampiofana vahiny manampy ny manam-pahaizana eto an-toerana amin’ny fampiofanana ireo mpianatra ireo », hoy hatrany ny fanazavan’ity tale jeneralin’ny IST ity. Nambarany koa fa mifandraika amin’ny politika ankapoben’ny fanjakana ankehitriny ny fananganana ity lalam-piofanana ity.
Fifaninanana hidirana taona voalohany
Ankoatra ireo, efa misokatra sahady koa amin’izao ny fisoratana anarana hidirana taona voalohany ao amin’ny Ist Antananarivo ary hifarana amin’ny 21 septambra 2019 izany. Ny 23 ka hatramin’ny 24 oktobra kosa no hatao ny fifaninanana. Tahaka ny mahazatra hatramin’izay dia alohan’ny fanadinana Bakalorea hatrany no hanaovana ity fifaninanana ity. Bakalorea farafahakeliny no mari-pahaizana takiana saingy azo ekena ho isan’ny mpifaninana ny tanora vao hiatrika ny fanadinana bakalorea. Tsy maintsy misy kosa nefa ny fepetra arahiny mandritra. Raha ka afaka amin’ny fifaninanana nefa tsy afaka fanadinana bakelorea dia tsy azo raisina ary tsy miverina ny sara-pisoratana anarana sy ny vola naloa.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68196) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (638) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (337) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (227) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (215) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (194) 18 février 2020